ပီတိ: ခိုနားရာ - ခိုလေးတွေ နားဖို့ နေရာရှာ
Posted by P.Ti at Thursday, August 07, 2008
အောင်မလေး .. အိမ်ငှားရတဲ့ ဒုတ်ခ မသေးပါလား ။ ဂျေတီစီမှာ အိမ်စောင့်တုန်းက စာမေးပွဲအောင်စာရင်း စောင့်ရသလိုပဲနော် ...
ကိုပီတိတို့ ကံကောင်းတယ် ။ ခု အိမ်နေရာလေးကလည်း အရမ်းကောင်းတာပဲဆိုတော့ ...
ဟိုအမ အိမ်ပြောင်းသွားတာ သူ ကံကောင်းတာလား ၊ ကိုပီတိ ကံကောင်းတာလား ငှဲ ငှဲ ...
know the feeling of waiting at JTC. Last time, I reach to JTC at 8:45am( the office open at 8:30) and my queue no is 20. hoo... that day,I even had to skip my lunch.
အမလေး ပီတိရယ် မောလိုက်တာ ။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကိုယ်ပါ စိတ်ပူလာတာ ရပါ့မလား ရပါ့မလားဆိုပြီး။ ရပြီဆိုတာတွေ့ မှ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်
ရေးတတ်တယ်ဗျား၊ ကျနော့်မှာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်နေရတာ.. လိုချင်တာ ရသွားတယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။
အမလေး..ကျမ JTC လျှောက်တုံးကလဲအဲဒီလိုဘဲ။ အိမ်ရှင်တွေနဲ့အဆင်မပြေလွန်းလို့ JTC ကိုရအောင်ငှားရတာ။ တကယ်မောတယ်။ကျမသူငယ်ချင်းများညအိပ်တောင်တန်းရ
စာရေးကောင်းပါတယ်။ အစအဆုံးလက် က မချနိုင်ပါဘူး
စာဖတ်သူတွေကို စာအဆုံးအထိ တထိတ်ထိတ်နဲ့ အတူအိမ်လိုက်ရှာရသလိုဖြစ်အောင် ရေးသွားတာ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ အိမ်လေး ရသွားလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။ ကိုပီတိ စကားပြောတာလေးတွေနဲ့ ရေးတာမျိုးဆို ဖတ်လို့ အင်မတန်ကောင်းတာ သတိထားမိပါတယ်။ အဲလိုမျိုးလေးတွေ များများရေးပါဦးနော်။
ဟုတ်တယ်ဂျစ်တူးရေ... အိမ်ငှားရတာတကယ်မလွယ်ဘူး… အရင်ကထက် ပိုပြီးဆိုးတယ်…
အဲဒီအမ အိမ်ပြောင်းတာကတော့ သူကပြောတော့ သူကကံကောင်းတာတဲ့၊ ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်ထင်တော့…. နှစ်ယောက်စလုံးကံကောင်းတာပေါ့…. :P
Hi Shin, Thanks for your comment. Yeah… We can say that we are lucky to get that flat and we were late for lunch on that day as well… Experience of renting house is not pleasant.
ဟုတ်တယ်… မလင်းရေ… ကျွန်တော်တို့လည်း တကယ်ကို စိတ်ပူရတာ… မရရင်တော့ ဒုက္ခများမယ်ဆိုပြီးတော့လေ…
ကိုတီဇက်အေ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီကိုလာကိုလည်း ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တယ်၊ ကွန်းမန့် မရေးဖြစ်လို့ပါ။
Soesint … ဟုတ်တယ်… အိမ်ရှင်တွေနဲ့နေရတာ အဆက်ပြောတာ ခပ်ရှားရှား။ အိမ်ရှင်တွေကလည်း သူတို့အိမ်ကိုပျက်မှာစီုး၊ ကိုယ်ကလည်း မလွတ်မလပ်နေရဘူး။ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အိမ်ရှင်တွေဆိုပိုပြီးဆိုးတယ်၊ အပတ်တိုင်းနီးပါးအိမ်လာပြီး စစ်ဆေးနေတတ်တယ်လေ…
မခင်ဦးမေရေ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဘာစားချင်လည်းပြောအမ။ … ပြောပဲပြောခိုင်းတာနော်… ဟိ :P
ရွှေဂျမ်းရေ… အဲလိုမှတ်ချက်ပေးလို့ ဆက်ပြီး ရေးဖို့ အားပိုရှိသွားပါပြီ၊ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်တော်ရေးတာလေးတွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖတ်လေ့ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေကတော့ ဆက်ပြီး စာရေးဖြစ်အောင် တွန်းပေးတဲ့အားတွေပါပဲ။
ဒီနေ့မှ ဖတ်ဖြစ်တာ... အိမ်တအိမ်ရှာရတာ ဒီလောက်ခက်သလားနော်.....
အမကတော့ ကံကောင်းသလိုပဲ. ခုနေတဲ့ အိမ်ကလေးကို အိမ်ရှင်က အမကို လာပြီးကို ငှားပါလို့ ပြောတာ သိလား။ တကယ်လဲ ကောင်းတယ် ။ တန်လဲတန်တယ်။ ဘယ်တော့ ဘာဖြစ်ဦးမယ်တော့ မသိသေးဘူး။ ခု ဒီမှာလဲ အိမ်ငှားခတွေ တက်နေပြီဆိုတော့ ဘယ်နေ့ တိုးတောင်းဦးမယ် မသိသေးတာလေ။
အဲဒီမှာ အိမ်ငှားရတာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်မယ့် ပုံဘဲနော်။ အိမ်ရှာတဲ့သူတော့ မသိဘူး။ ဖတ်ရတဲ့သူတောင် နည်းနည်း အမောဆို့သွားတယ်။ တစ်ရက်ပြီးရင် နောက်တစ်ရက် ဘာဖြစ်မလဲ။ ဘယ်နေ့ ရမလဲဆိုပြီး ဆက်ဖတ်လာတာ။ နောက်ဆုံး JTC သွားတဲ့ အပိုဒ်ကိုရောက်တော့ မဆီမဆိုင် အဲဒီအိမ်ခန်းလေး ရပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။ ပြီးသွားမှ ငါ့နှယ် ရူးလိုက်တာလို့တောင် ပြန်တွေးပြီး ရယ်မိတယ်။ :)